Igumbi elinye leDeluxe kwiHotele yeeNyoni zeParadesi
Iintaka zeParadise ihotele ikufuphi neSinharaja World Heritage Site.
Ixabiso lelegumbi kunye nesidlo sakusasa kuphela. 7.00$ kwisidlo sasemini kunye ne-7.00 $ kwisidlo sakusihlwa. Ukutya okukhethekileyo kunokubonelelwa (ukutya kwemveli okanye kwasentshona, ijusi yeziqhamo zendalo, imifuno ekhuliswe ekhaya, iziqhamo kunye neti)
Iibhedi ezimbini zinokulungiswa xa ziceliwe.
Uhambo oluya kwiSiharaja World Heritage Site, imisebenzi yendawo, ukuhamba ebusuku kunye nokubukela iintaka kunokucwangciswa.
Nandipha ukuhlamba kumlambo okufutshane ukuba uyathanda!
Ihotele yeentaka iparadesi ngokwenene ngamava akhethekileyo angafumaneki kwenye indawo eSri Lanka okanye kwihlabathi. Intuthuzelo yakho yinjongo yethu. Sidale indawo yokuhlala epholileyo onokuthi ucinge ngayo njengekhaya lakho kude nekhaya xa ukuloo ndawo. Sinikezela ngeenkonzo kuye nawuphi na umhambi, nokuba ukushishini okanye uhambo lwakho lololonwabo. Xa ucwangcisa utyelelo lwakho, sithathele ingqalelo ngokuhlala kwakho.
Birds paradise Hotel ibekwe eSinharaja, kwiPhondo laseSabaragamuwa, eSri Lanka.
Sisekelwe kwimizuzu engama-20 kude nelona hlathi lidumileyo lemvula laseSinharaja. Kwakhona sijikelezwe buhlaza okusingqongileyo kunye neeNtaba. Umntu unokonwabela ibhafu yeNdalo emlanjeni emva nje kwehotele.